तिथि मेरो पत्रु » शीर्ष 10 सफल डेटिङ लागि सुझाव
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: अक्टोबर. 30 2020 |2मिनेट पढ्न
सफल डेटिङ कस्तो अर्थ राख्छ? डेटिङ गर्दा यस प्रश्नको जवाफ जीवन र तपाईं आफैलाई लागि राख्नुभएको लक्ष्य को आफ्नो दृष्टिकोण निर्भर गर्दछ. यो एक दीर्घकालिक सम्बन्ध र पनि विवाह तिर एक गेटवे छ भने एक मिति केवल सफल छ जसलाई लागि ती छन्. यो ओछ्यानमा मा अन्त थिएन भने अरूले यो एक प्रकोप विचार हुन सक्छ. केही लागि, तिनीहरूले एक राम्रो समय थियो भने एक मिति सफल छ. निम्न सुझावहरु एक विस्फोट मा प्रत्येक मिति परिणत हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ तापनि, तिनीहरूले पक्कै तपाईं आफ्नो डेटिङ असफलता दर कम मदत गर्नेछ.
आफ्नो आशा राखेका आफ्नो उद्देश्य गर्न ढाल्न
कुनै पनि अन्य परियोजना जस्तै तपाईं मा मुछिन, व्यक्ति देखि आफ्नो अपेक्षालाई तपाईं डेटिङ गर्दै वा मिति देखि नै आफ्नो उद्देश्य भएको युगानुकूल गर्नुपर्छ. तपाईं एक-रात-अडान लागि देख रहे भने, तपाईं उसलाई आफ्नो बाँकी जीवन खर्च गर्न जाँदै थिए भने आफ्नो साथी जाँच्न छैन / उनको.
आफ्नो डेटिङ उम्मेदवार चयन गर्नुहोस्
तपाईं आफ्नो सफलता दर वृद्धि गर्न चाहनुहुन्छ भने, उपलब्ध देखिन्छ जो कसैलाई केटासित छैन. क्षमता को सूचीबाट कट तपाईं साधारण मा केहि पनि छैन, जसलाई सबै ती तिथिहरु.
एक तारीख आफ्नो नाटकीय कौशल प्रदर्शन गर्ने मौका छैन. स्वाभाविक ऐन र तपाईं साँच्चै भन्दा केहि गर्दै छन् बहाना प्रयास नगर्नुहोस्, तपाईं एक दीर्घकालिक सम्बन्ध देख विशेष गरी भने. सत्य अन्ततः बाहिर आउनेछ र अन्य फन्दामा परेको महसुस हुनेछ.
सरल कुराहरू राख्नुहोस्
सबै भन्दा सफल मिति सरल छन्, आकस्मिक व्यक्तिहरूलाई. यो एक पहिलो पूर्ण रूपमा अन्धा तिथि छैन भने, आफ्नो समान चासो सोच्न र केही गतिविधिहरु संग तपाईं को दुवै अपिल सक्छ कि उन्मुख विचार आएको.
वर्तमान मा फोकस
नियमित रूपमा कुराकानी मा पछिल्लो ल्याउन छैन र एक बानी मा आफ्नो असफल सम्बन्धको बारेमा गनगन बारी छैन. यो महत्त्वपूर्ण छ, जबकि दुई साझेदार आफ्नो पृष्ठभूमि बारेमा कुरा सेयर कि, कुनै एक एक पूर्व तुलना गर्न चाहनुहुन्छ. भावी साथ एक नाजुक विषय छ. तपाईं र तपाईंको डेटिङ साथी दुवै यस्तो विषय लागि तयार हुनुहुन्छ भनेर पक्का हुनुहुन्न भने यसलाई ल्याउन नगर्नुहोस्.
आफ्नो सबै भन्दा राम्रो हेर
कुनै कुरा मान्छे के भन्छन्, एक पहिलो तारीख उपस्थिति र सामान्य छाप बारेमा सधैं छ. त्यसैले, तदनुसार आफैलाई व्यवस्था: धारण केही बनाउन, तपाईं र मुस्कान राम्रो देखिन्छ कुरा लगाउने. तथापि, के तपाईं सम्बन्ध मा हो विचार गर्दा आफैलाई हेरचाह रोक छैन.
भुइँमा आफ्नो खुट्टा राख्नुहोस्
कुनै कुरा आफ्नो मिति देखिन्छ कसरी ठूलो, व्यावहारिक रहन. ओछ्यानमा हाम फाल्न नगर्नुहोस्, कम से कम छैन पहिलो मिति मा. तपाईं नै चलचित्र मन किनकी विवाह र छोराछोरी बारेमा कुरा सुरु नगर्नुहोस्.
मिति लागि आफूलाई तयारी
तिथि तयारी केवल सफा हुनुको समावेश छैन, राम्रो महक र स्मार्ट लाग्दैछ. तपाईं एक लामो समय को लागि डेटिङ गरिएको छैन भने, तपाईं लामो अप्ठ्यारो चुपचाप को जोखिम जोगिन भनेर कुराकानी को विषय सोच्न.
प्रदर्शनमा बाहिर जानुहोस्
मान्छे स्मार्ट भएको बहाना बस किनभने, इमानदार र एकल, तिनीहरूले साँच्चै मतलब छैन. हास्यास्पद सबै र सबैका शक बिना, यो फटाहा बाहिर हाजिर गर्न प्रयास र व्यक्तिगत राय छ गर्न पर्याप्त जानकारी सङ्कलन गर्न.
तपाईं डेटिङ दृश्य छन् किन कुनै कुरा, लागिपरेको बन्न छैन र यो ज्यादा छैन. तपाईं आसपास सबैलाई डेटिंग सफलता को आफ्नो अवसरहरुमा वृद्धि गर्दैन. थप, तपाईं डेटिङ बाहेक केही अन्य सामाजिक जीवन छ भने तपाईं र अधिक रोचक लाग्न हुनेछ.